I-OpenExpo Virtual Experience 2021, enye yemicimbi edume kakhulu yeSoftware ebuyisa | Kusuka kuLinux
I-OpenExpo Virtual Experience 2021, ingenye yezenzakalo ezidume kakhulu zeSoftware Free
Esinye sezehlakalo ezidume kakhulu futhi ezibalulekile zesimo seSpanish Free Software eSpain sizokwenzeka ezinsukwini ezimbalwa ezizayo, ngikhuluma nge-OpenExpo, okwathi ngenxa yezizathu zokuphepha yaba ngumcimbi obonakalayo, uzibiza Isipiliyoni se-OpenExpo Virtual 2021.
Kulo nyaka ifomethi ebonakalayo efakwe ngonyaka odlule iyaphindwa, kepha, ngaphezu kwalokho, Kusuka kuLinux iba yingxenye yabalingani bomcimbi abezindaba.
Uhlelo lwalo nyaka luzoba no-godfather ohlukile, omkhulu UChema Alonso, uphawu lokuma komhlaba ngokuya ngezokuphepha kwamakhompiyutha kanye nesinye sezibalo zobuchwepheshe ezikhulunywa kakhulu eSpanish ngaphakathi kwezobuchwepheshe. Kepha akupheleli lapho. Ngaphezu kokuba neChema Alonso, i-OpenExpo izogcwaliswa ngamatimu amasha futhi abamele nezinkampani lokho akwenzi nje kuphela i-panorama yezobuchwepheshe yaseSpain nengxenye yeLatin America kodwa baye baba nokuthandwa okukhethekile ezinyangeni ezisanda kwedlula, ezimweni eziningi bengabafuni futhi kokunye ukuthandwa kube emhlabeni wonke.
Ngeshwa i-OpenExpo ayikabi ibhentshimakhi yobuchwepheshe emhlabeni wonke futhi lokho kusho ukuthi izinkampani ezinkulu ezifana neGoogle noma i-Amazon azinantshisekelo kulo mcimbi kodwa kufanele sisho ukuthi sizoba khona namalungu eDell Technologies, i-Oracle, i-Intel noma i-OVHcloud phakathi kwabanye vele lolu hlu lukhulu kakhulu futhi luhlanganisa izihloko eziningi zobuchwepheshe.
Izihloko i-OpenExpo Virtual Experience 2021 ezobhekana nazo zizoba Blockchain, Idatha enkulu, i-Cloud, i-Cybersecurity, isoftware yomthombo ovulekile, ngaphezu kokuyihlanganisa nezinye izihloko ezinjenge-digitization, ukuqeqeshwa kwe-IT nomsebenzi, i-Fintech, ukufinyeleleka, phakathi kwezinye izihloko.
Lezi zihloko zizofakwa kanjani ku-OpenExpo Virtual Experience 2021?
Njengakuhlelo lwangaphambilini, kufanele sikhumbule ukuthi sibhekene uhlelo lwe-8 lwe-OpenExpo, kuzoba nezinkulumo, imihlangano, izingqungquthela, imibukiso, ama-workshops, ama-meetups, izinkundla, amatafula ajikelezayo, njll. Futhi ngalezi zindlela, abasebenzisi bazokwazi ukubamba iqhaza kulo mcimbi kanye nezikhulumi zalo nyaka.
Ukuhambela nokuhlanganyela kuzoba ngokuphelele futhi i-100% ngeSpanishi, ngakho-ke abasebenzisi abakhuluma iSpanishi basenhlanhleni ngoba ngeke sincike enkingeni yendawo ukubamba iqhaza kwi-OpenExpo Virtual Experience 2021. Imicimbi izokwenzeka kusuka ngoJuni 8 kuya kuJuni 11, womabili afakiwe. Singaluthola uhlu lwezikhulumi kanye nokubamba iqhaza kwazo ngokusebenzisa iwebhusayithi esemthethweni yomcimbi.
Inhlangano isazisile ukuthi kulolu hlelo olusha kuzoba nezindaba ezimbalwa impela, kodwa okwamanje sazi ezimbili kuphela. Omunye wabo uzoba i-OpenTrivial, i-trivia ngamaqembu, iqembu ngalinye lizokwakhiwa ochwepheshe abayi-4 abazophendula imibuzo ngomhlaba wezobuchwepheshe noMthombo Ovulekile.
Owesibili wabo uzoba "Izwi Lezethameli", Umsebenzi esazi kuphela igama lakhe nokuthi ukwazi okuningi ngawo kufanele sibambe iqhaza kulo mcimbi (njengoba inhlangano isazisa).
Ukubamba iqhaza ku-OpenExpo Virtual Experience 2021 kungenziwa ngokubhalisa ngokusebenzisa izixhumanisi ezisemthethweni zomcimbi:
Noma singakwenza ngokusebenzisa i- iwebhusayithi esemthethweni yomcimbi.
Umphakathi we-Open Source mkhulu kakhulu futhi unamandla ngenxa yokuvuleleka kwawo futhi isici sakhe sokusebenzisana, isici esenza i-OpenExpo Virtual Experience ibe umcimbi ongaphezu kokuthakazelisa Awucabangi?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-OpenExpo Virtual Experience 2021, ingenye yezenzakalo ezidume kakhulu zeSoftware Free
Sebastian Zapateiro kusho
Ngiyalithanda iqiniso lokuthi imisebenzi yalolu hlobo iyenzeka, Siyabonga ngokubika!
Phendula uSebastián Zapateiro
Ngiyabonga kakhulu ngokusifunda. Siyakunaka lokho ositshela khona. Ngeshwa ayikho imicimbi eminingi, noma kukhona eminye. ;-)